ကြောင်ကြောင်တွေးကြောင်ကြောင်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောင်ကြောင်တွေးကြောင်ကြောင်ရေး
Posted by ကြောင်လေး on Mar 19, 2012 in Creative Writing, Critic, Think Different | 15 comments
“အခုခေတ်တော့.. စေတီပုထိုးကြီးတွေ..မြင့်မားထိုးထောင်များပြားအောင်လုပ်.. အဲဒီကထုံးသင်္ကန်း..အဲဒီကနေ.. ရွှေရောင်..အဲဒီကနေ..ရွှေအစစ်.အဲဒီကနေ.. စိန်ဖူးတော်..အဲဒီကနေ..ကျောက်မျက်ရတနာတွေ.. အဲဒီကနေ.. အဲဒီကနေ..အဲဒီကနေ.. မဆုံးနိုင်အောင်အားစိုက်နေတာနဲ့..ငွေအရင်းအမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေတာမို့……”
သဂျီးရဲ့ကွန်မန့်လေးဖတ်လိုက်ရတော့ စေတီတည်တာနဲ့ ဌာပနာထည့်တဲ့ကိစ္စကို
ဆရာတော်တစ်ပါးမှတ်ချက် ချတာလေးသတိရသွားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့
အမှန်စေတီလေးမျိုးက ဓာတုစေတီ၊ဓမ္မစေတီ၊ဥဒ္ဓိသစေတီ၊ ပရိဘောဂစေတီ
အကျယ်မချဲ့တော့ပါဘူး၊ ဓါတုစေတီဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓါတ်တော်တွေကိုဌာပနာထားပြီး
အုတ်နဲ့ စေတီ တည်ထားတာပါ၊ ဓါတ်တော်တွေကိုရည်မှတ်အာရုံပြုပြီး ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ရှေးဘုရင်တွေက သူ့ထက်ငါအပြိုင် စေတီတွေ တည်ပါတယ်၊“လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရာပေါင်း”၊တို့ “သဇင်ပန်းခိုင်တမြိုင်မြိုင် ရခိုင်ဘုရားပေါင်း”တို့ကြားဖူးကြမှာပါ။ ရခိုင်ဘုရားကပိုများပါတယ်။
ပုဂံဘုရားတွေဧရာဝတီမြစ်ရေတိုက်စားလို့ ပါသွားတာက “ရွှေလသာဝါ၀ါဝင်း၊ဘုရားရေချိုးဆင်း” ဆိုတော့ နှစ်ခုပေါင်းမှ လေးသန်းကျော်ပါ၊ရခိုင်ဘုရားက ခြောက်သန်းကျော်၊ အဲဒီအထဲကို ထည့်စရာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အမွေအနှစ်တွေ ထည့်စရာမရှိတော့ ရွှေငွေကျောက်သံပတ္တမြားတွေထည့်ကြတယ်၊ နောင်ဘုရားပွင့်ရင် သုံးဖို့လို့ ယူဆပြီးပြောကြတာတွေကြားရပါတယ်။ အခုကာလ (တန်ခိုးကြီးဘုရား)ဆိုပြီးထင်ရှားနေတဲ့ဘုရားတွေထဲမှာ မြတ်စွားဘုရားရဲ့
ဓါတ်တော်၊ဆံတော်၊အံတော်တွေ ဌာပနာထားလို့ ထင်ရှားနေတာရှိသလို ဘယ်ဘုရင် ဘာဖြစ်တုန်းကတည်ခဲ့တာ၊ဘာအကြောင်းကြောင့် တည်ခဲ့တာ၊ စစ်နိုင်တုန်းကတည်ခဲ့တာ၊ စစ်ရှုံးတုန်းကတည်ခဲ့တာ၊ ဘယ်ဘုရင်မစစ်ပြေးရင်းတည်ခဲ့တာ၊ စသည်ဖြင့်တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း
အထိမ်းအမှတ်စေတီ တည်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ဘုရင်တွေ ဘုရင်မတွေ
စစ်ရှုံးလို့ပြေးတယ်ဆိုတာ ဆင်တပ်၊မြင်းတပ်၊ခြေလျင်တပ် နောက်လိုက်နောက်ပါ တပြုံကြီးနဲ့
ရွှေငွေ ကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေ သယ်ပြီး တစ်တောင်တက်၊တစ်တောင် ဆင်း တရွေ့ရွေ့ပြေးကြတာပါ၊ နောက်ကလိုက်သူတွေကလည်းတရွေ့ရွေ့ပါပဲ၊ တနေရာရောက်ရင် အေးအေးဆေးဆေးတပ်စွဲ နေကြ၊ မိုးတွင်းစစ်နားထား၊
သာသာယာယာရှိမှပြန်တိုက်ကြပေါ့။ အခုခေတ်အသံထက်မြန်တဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ တိုက်ကြတာတောင်လေးငါးနှစ်ကြာတာ ဆိုတော့ ဟိုတုန်းကအနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
အဲဒီလိုပြေးရင်းက ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေလုံခြုံအောင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ စေတီတွေတည်ပြီး
သိမ်းဆည်းခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့စေတည်တွေကိုမထိကြဘူး၊
ဘုရားနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘီလူးရုပ် နတ်ရုပ်အမျိုးမျိုးထုလုပ်ပြီးကျိန်စာတွေတိုက်ကြပေါ့၊(အဲဒီကျိန်စာဘယ်လောက်စွမ်းလဲမသိ)
အဲဒီအရုပ်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အခါ ဘာနတ်ညာနတ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာတွေလည်း
ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။ ပါလာတဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါထဲက တချို့ ကိုဘုရားကျွန်အဖြစ် ရွာတည်ထားပေးခဲ့၊ပြီးဆက်ပြေးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ပြေးရင် ရောက်လေရာ စေတီတည်ပြီး
ပစ္စည်းဖွက်ခဲ့ကြတာကို အတုယူ နောက်လူတွေ စေတီတွေတည်တဲ့အခါ စေတီဆိုရင် အထဲက ဌာပနာမှာ ရွှေငွေကျောက်သံပါရမယ် နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားအတွက် သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီး ၀ါဒတွေဖြန့်ပြီးတည်လိုက်ကြတဲ့စေတီတွေ လူတွေကလည်း ဘာမသိညာမသိ
အဟုတ်ထင်ပြီး လက်စွပ်၊ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်၊ ဆံထိုး၊ ပါလာသမျှ ချွတ်လှူလိုက်ကြတာဆိုတော့ ကာ…………………
အဲလို အတွေးအခေါ်မျိုးကို ခုမှပဲ ကြားဖူးတယ်။
စေတီတွေတည်ပြီး လုံခြုံအောင် ထားတယ်ဆိုပါတော့….
ခုခေတ်လည်း ဌာပနာ ဖောက်တယ် ဆိုတာတွေ၊
ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီတွေ မှောင်ခို ရောင်းဝယ်နေတာတွေ ရှိတာပဲ။
စေတီတည်ပြီး ထားရုံနဲ့ လုံခြုံနိုင်ပါ့မလား။
လုံခြုံအောင် စေတီတည်ပြီး ထားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
အဲလိုတွက်မယ်ဆိုရင် စစ်ပြေးတဲ့သူတွေထဲက အချို့တဝက်က သယ်မရတော့မဲ့အတူတူ ပါလာလေးတွေကို ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီး လှူခဲ့တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဖွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်.. မကောင်းပြောရရင် ကျားဥပုသ် စောင့်သလိုပေါ့။ တခုရှိတာ ဟိုးတုန်းကလူတွေရဲ့ စိတ်ကို အခုခေတ်လူတွေစိတ်နဲ့ သွားမနှိုင်းနဲ့ဗျ။ အိပ် စား ကာမ ဆိုတဲ့ အခြေခံသဘောလောက်သာ တူလိမ့်မယ်။ ခေတ်ကာလရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက အရမ်းပြင်းထန်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကူမြူနစ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ မိရိုးဖလာ ရိုးရာ ဘာသာတရားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာကိုပဲ ကြည့်ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ပြောင်းပြန် အရင်ခေတ်ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အစဉ်အလာကို အချိုးကျ မြင်ယောင်နိုင်တယ်…။ သဟာကြောင့်လည်း လူကြမ်းရင် နတ်ကြမ်းမခံနိုင်လို့ ပြောကြတာနေမှာ.. နတ်ဘယ်လောက် စွမ်းစွမ်း လူလက်မခံရင် ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတော်ကောင်း ဘယ်လောက်တရားပြပြ လူမိုက်နားမထောင်ရင် အသုံးမဝင်ဘူး။ လူ့ကံဆိုတာ အားအကြီးဆုံးပဲ.. ဘုရားရှင်တောင် ကျွတ်သင့်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ ဘုန်းကံပါရမီပါလာသူဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ချေချွတ်ပေးရတယ်။။ ပြောချင်တာ လောကမှာ အရာရာတိုင်းသည် နှိုင်းရသဘောတွေ။ အခုအချိန်မှာ မဟုတ်လို့ မဖြစ်လို့ ဟိုတုန်းက မဟုတ် မဖြစ်ခဲ့ နောင်လည်း မဟုတ် မဖြစ်ဘူးလို့ တရားသေ မကိုင်စွဲရဘူး။ တဖက်မှာလည်း မဟုတ် မဖြစ်တော့၊ မဟုတ် မဖြစ်သေးတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မျက်မှောက်မှာ အယူအစွဲ မကြီးလွန်းရဘူး။ ဘုရားဟောကို ဘာသာရေးဆန်တယ်လို့ ယူဆရင် မျက်မှောက်ခေတ် လောကဓာတ်ဆရာကြီး ဦးအိုင်းစတိုင်း ပြောသွားတဲ့ ရီလေတီဗတီ နှိုင်းရသီအိုရီနဲ့ စဉ်းစားကြည့်။
သားသား မ သိဘူး?????
ဘုန်းဘုန်းများ ဒီကိစ္စကို ရှင်းပြတော် မူပါဘုရား
ရွာသား ပညာရှိကြီးများ သတိထားတော်မူပါ
နတ်ဆိုးလေးထက် ဆိုးတဲ့ ကြောင်လေး မွှေနေပါပြီဗျို့
ချကွာ လုပ်ကွာ.. ဌာပနာတွေ အကုန်ဖောက်.. (ပဲမုန့်ထဲက ပဲဌာပနာ ဖောက်စားခြင်း)
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. အဲလို အတွေးတွေ ရှိလို့ ဌာပနာ လိုက်ဖောက်တဲ့ လူတွေ ရှိနေတာ..
ဘယ်လို အတွေးအခေါ်ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်… သူ့ဟာသူ ရှိနေတာ ဘာမှ မလုပ်စေချင်ဘူး။
ဒါက ယဉ်ကျေးမှု ပြယုဒ်ပါပဲ။
ပုဂံ ဘုရားတွေ ကို ကြည့်ပြီး မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာတွေ ဘယ်လောက် တော်ခဲ့တယ် စသဖြင့် အများကြီး သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ထိုခေတ် ထိုအခါက အုတ်တွေ ကျောက်တုံးတွေ အဲဒါတွေက ယခုခေတ်မှာ အလွန်ကို အဖိုးတန်လှပါတယ်။ သမိုင်းကို မြတ်နိုးမှ သမိုင်းက ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး အဖိုးတန်တာ ပေးပါလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ခရီးသွားတွေ လာကြည့်မယ် သူတို့ ဆီက ၀င်ကြေးရမယ်။ ဒေသခံတွေ အလုပ်အကိုင်ရရှိလာကြမယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တကမ္ဘာလုံး လုပ်စားနေကြတာ ကြာလှပြီ။ ကိုယ်တွေ လုပ်ကွက်တွေ အများကြီး ရှိရက်နဲ့ မလုပ်တတ်လို့ ဆင်းရဲနေကြတာ။
သူများ လုပ်နိုင်တာ ဆို ကိုယ်လည်း ရင်ဘောင်တန်း လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။
သမိုင်းထဲမှာ နစ်နေလို့ မရဘူး သမိုင်းကို အားကိုးပြီး ပိုက်ဆံ ရှာရမယ်။
ဒါမှ ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာ.. သမိုင်းကို အမျိုးမျိုး ငြင်းပြီး ရန်ဖြစ်နေသ၍ ဘယ်တော့မှ ထိပ်ဆုံးမရောက်နိုင်ဘူး။ မတူညီတာတွေ အများကြီးထဲမှာ မှ တူညီတာတွေပဲ စုပြီး အရှေ့ကို ချီတက်မှ ရမယ်။
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အိမ်သာများလည်း
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာမှာမို့ …
အဆိုပါ အလုပ်ပြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းမလား တွေးနေပါသည်
ရှယ်ယာပါမားဟင်…. မြန်မာပြည်ပါတ်ပြီး အိမ်သာဆောက်ကြမယ်…
တိုးလုပ်ငန်း လုပ်မယ် ဆို တော်သေးတယ်။
ခရီးသွားတွေ အတွက် ရောက်ရာ အရပ်မှာ အလွယ်ဖြုတ်သိမ်းလို့ ရတဲ့ အကာလေး ၄ခု ကို အမြန် ကာပေးပြီး လယ်ကွင်းထဲမှာ လွတ်ခိုင်းမယ်။
မြေဆီ သြဇာ မြေဆွေး ရအောင် စီမံချက် ချပြိး လုပ်ပလိုက်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ။
သခင်သန်းထွန်းဆိုတဲ့ ဘဘကြီးတယောက်က .. တဲ့…
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို မော့ကြည့်ပြီး ပြောသတဲ့…
“နေပူလာပြီ.. အရိပ်ကျတဲ့ဘက်က သွားဖူးရအောင်…..” ဆိုလား …
ဒီအယူအဆကို ပြောတဲ့ဆရာတော်ဟာ နယ်လှည့်တရားဟောဓမ္မကထိက တစ်ပါးဖြစ်ပြီး တရားဟောလို့ရတဲ့ငွေတွေကို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပါ၊
သူ့ကိုကားမောင်းပို့ရတဲ့ ဒကာတစ်ယောက်ကပြန်ပြောပြလို့ ဒီစကားကိုသိရတာပါ။
ဆရာတော်ဆိုလိုချင်တာက စေတီတွေ တည်တဲ့ရှေးဟောင်းဗိသုကာလက်ရာတွေအကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့
ရွှေငွေတွေ ထည့်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ အခုလဲ အဲဒီအတိုင်းလိုက်ထည့်နေတဲ့ရွှေငွေတွေကို တကယ်ဆင်းရဲနေတဲ့ သူတွေကို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးစေချင်တဲ့စေတနာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ (ကျနော်မေ့နေလို့) ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့စာအုပ်နောက်ပိုင်းမှာရေးထားတာ
” မြန်မာတွေ တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်တွေ့ရင် စေတီတည်ပြီးတောင်ပေါ်မှာရွှေရောင်ဝင်းနေတယ်၊ တောင်ခြေက ရွာတွေအားလုံး က ခရာစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်တယ်” လို့ရေးထားတာကျနော်ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရွာသူားတွေ ကစာဖတ်အားကောင်းကြတော့ သိတဲ့သူတွေရှိကြမှာပါ။
အင်း လူသားအားလုံးတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာမဟုတ်တောင် မိမိလူမျိုး၊ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်အောင် လုပ်ထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကိုဖူးမြင်တာထက် သူ့ဟောကြားတဲ့တရားကို လိုက်ကျင့်သုံးနေထိုင်တာက ပိုကောင်းတယ်လို့ မိန့်ခဲ့တာကြောင့် လူသားတို့ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးမို့ အဲဒါကို အဓိကထား လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ သူ့ဟာသူတော့ မှန်နေပါတယ်။
စေတီထဲမှာ ရွှေငွေတွေထည့်တာက မိမိတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကို မိမိရိုသေလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အရာထဲကိုထည့်ပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနှစ်ခု ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် မှန်ကန်တဲ့အလုပ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ရွှေငွေတွေကို ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးချမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြောသူကလည်း သူပြောသလို လူသားတို့ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် လူသားတွေကို ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် မြင့်မြတ်တာမို့ မှန်ကန်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒက လူသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်အောင်(ဘုရားဟောတရားများသိနေပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်နေအောင်)လုပ်ပေးခြင်းက ပိုကောင်းတာမို့ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် လူသားတိုင်းရင်ထဲကို ဘုရားတရားများသိရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ကြကာ ငြိမ်းချမ်းရာအမှန်ကိုရောက်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်ရော သူတစ်ပါးတို့ရော ပြုလုပ်ပေးကြပေါ့လေ။
ဝေး ဒါမှ တို့ ဘုန်းဘုန်း ကွ ..ဟ..ဟ..ဟ.. အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး(ကြောင်လေး ကုတ်သဖြင့်) အရှင်ဆန်နီနေမင်းအား ဤ ပိုစ့် တွင်လာရောက်ကွန့်မန့် ပေးရန် လမ်းညွှန်ပေးသော ကိစ္စဖြင့်။ ဂိန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တားတားကို နီထားတယ်ဗျ ဘာလို့လဲ တိဘူးနော်… အနော်က မွှေတတ်လို့ အနော်လို့ဘဲ မွှေတတ်တဲ့ ကြောင်လေး လာပြီလို့ ပြောလို့များ နီလိုက်တာလားခင်ဂျ။
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း”(၄၄၄၆၇၃၃)
ကိန်းဂဏန်းက လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကနေ လွတ်နေပါတယ်..။
ပုဂံနယ်က.. မိုင်၂၀-၂၅လောက်ပါတ်လည်ရှိတာ.. ဘယ့်နှယ်အဲလောက်တည်ရပါ့မလည်း..
နရသီဟပတေ့လက်ထက်မှာ.. မွန်ဂိုတွေပုဂံဝင်လာတော့.. ခံတိုက်ဖို့စစ်ပြင်ရာမှာ.. ဌာပနာတွေကိုစစ်စရိတ်လုပ်တယ်..။ စေတီပုထိုးတွေဖြိုချပြီး ..အုပ်တွေယူ.. ခံတပ်လုပ်တယ်လို့.. ဖတ်ဖူးတယ်..။
ဒီအဖြစ်ဟာ..ရှေး.. မြန်မာတွေ စေတီပုထိုးတည်ကြတာရဲ့.. တွေးခေါ်ပုံတချုိ့ကို ထင်ဟတ်တယ်လို့ထင်တယ်…
ပြီးခဲ့ဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့.. စေတီပုထိုးတွေကို.. ပြန်ဖြိုချဖို့လည်းမဟုတ်..။ မပြုပြင်ပဲပစ်ထားရမှာလည်း မဟုတ်. အထဲက..ဌာပနာဖေါက်ပြီး.. သုံးစွဲရမှာလည်းမဟုတ်ပဲ.. ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ကို ထိမ်းသိမ်းရင်း.. အဲဒီကနေ လည်ပါတ်ဝင်ငွေရအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်..။
ဥပမာ.. တိုးရစ်ဇင်မှာ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်.. နိုင်ငံခြားသားတွေဆီက ငွေယူပေါ့..
အဲဒီဝင်ငွေတွေဟာ.. ဘိုးဘွားတို့ရဲ့..အမွေပဲ..။ ဒီအမွေကို.. တိုးပွားအကျိုးရှိအောင်ုလုပ်ကြရမယ်..
..တို့.. ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပြီလို့ ပြောချင်တာပါ..
‘Enough is enough’ ပေါ့…
လှူရင်.. သေသေချာချာ သမိုင်းကြည့်.. လက်ငင်းဖြစ်ရပ်ကြည့် စဉ်းစားပါ..
“ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ်”.. မလှူပါနဲ့.. တပြားတောင်မပေးပါနဲ့..
မမြင်ရတာတွေ(ဂမ္ဘီရတွေ)အတွက်.. မြင်ထိတွေ့ရတဲ့.. ဘ၀တွေကို… အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့..။
-တီတီရေငုံနှုတ်ပိတ်လို့ ဒီလောက်ပြောတာ ရေမငုံရင် ဒါ့ထက်ကောင်းတာပြောနိုင်မယ်ထင်ပါ့၊
“သို့သော် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒက လူသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်အောင်(ဘုရားဟောတရားများသိနေပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်နေအောင်)လုပ်ပေးခြင်းက ပိုကောင်းတာမို့ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကြောင့် လူသားတိုင်းရင်ထဲကို ဘုရားတရားများသိရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ကြကာ ငြိမ်းချမ်းရာအမှန်ကိုရောက်အောင် မိမိကိုယ်တိုင်ရော သူတစ်ပါးတို့ရော ပြုလုပ်ပေးကြပေါ့လေ။”
-ဆရာတော် ဆန်နီနေမင်းရဲ့ သဘာဝကျတဲ့ ကွန်မန့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား….
-နတ်ဆိုးကိုကြောင်လေးမကုတ်ရဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ကြောင်ကြီးဆိုရင်တော့ကုတ်ရဲမှာပါ။ အနီကကျနော်မပေးပါဘူး၊တကြိမ်တောင်ပြန်စိမ်းလိုက်သေးထင်တယ်။
“ဒါပေမဲ့..အသစ်တည်တာတွေဖြစ်တဲ့…အိပ်မက်အရ.. တည်တာ..ဘိုးတော်ပြောလို့.. ဆောက်တာ..
ဘုန်းကြီးလို့အမှတ်တရဖြစ်အောင်.. အစိုးရပိုင်းကလူတွေ..အာဏာနဲ့ဖိအားပေးတည်တာတို့.. ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပြီလို့ ပြောချင်တာပါ..”
-သဂျီးခင်ဗျာ ကျနော်ပြောတဲ့ဆရာတော်ကလည်း အဲဒီသဘောကို ပြောချင်နေပုံရပါတယ်။
-၀င်ရောက် သဘောထားကွဲလွဲဆွေးနွေးပေးကြသူ အားလုံး(အားလုံး)ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါမှ ပွိုင့်များများရပြီး စာရေးသူမြန်မြန်ဖြစ် အက်ဒစ် လုပ်လို့ရမှာ……..ခွစ်ခွစ်ခွစ်